လက်ကားကုန်ကြမ်း filter Filter စာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | HZFILTER
chamber filter press (သို့) plate ဟုခေါ်သည်နှင့် frame type filter press သည်လူကြိုက်အများဆုံး filter filter များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ရေမလိုသောရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးပြုသည်။
နာမည်: ကုန်သည်ကြီးများအသင်း / recessed filter ကို
အားသာချက် - လူကြိုက်အများဆုံး item
HZFILTER ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Filter Press
chamber filter press (သို့) plate ဟုခေါ်သည်နှင့် frame type filter press သည်လူကြိုက်အများဆုံး filter filter များဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ရေဖျန်းရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
filter press industry အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးစတိုင်လ်
အလိုအလျောက်ပန်းကန်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ဗုံး - ပင်လယ်အော်တံခါးကိရိယာများတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
filter ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို Q235 အရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်းသည်ပြားသည်၊ ဂဟေဆို့ - အစိုင်အခဲနှင့်တာရှည်ခံခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
သံချေးနှင့်သံအောက်ဆိုဒ်စကေးကိုဖယ်ရှားရန် Filter Press Main-beam ကိုမြန်နှုန်းမြင့်ဗဟိုမှသဲဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့နောက်သံချေးတက်ခြင်းနှင့်သံချေးတက်ခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် epoxy micaceous iron primer ဖြင့်ဆေးသုတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ filter press ၏ filter ကို PP မှပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အရသာမရှိ၊ အဆိပ်မရှိသော၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းတွင်လုံခြုံသည်။ ၎င်းသည်ပေါ့ပါးသော၊ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု၊ အက်စစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်၊ အပူချိန်မြင့်မားပြီးဖိအားမြင့်မားခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ထုတ်စက်၏ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်သည်ကျော်ကြားသောမော်တာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်ပြီးထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။ ပစ္စတင်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည့်မျက်နှာပြင်ရှိသံမဏိနံပါတ် ၄၅ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဆန့်ကျင်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သည်။
အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ဖွင့်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ဖိအားထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြfreeနာကင်းသောလည်ပတ်မှုတို့ကိုသိရှိနိုင်သည်။
Fliter： 1 ~ 1000m2.
ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအသံအတိုးအကျယ်： 0,001 ~ 20 မီတာ3.
ကိတ်မုန့်အထူ ~ 20 ~ 50mm ။
အစာကျွေးဖိအား：0~ 8 အရက်ဆိုင်။
အလုပ်လုပ်အပူချိန်：0~ 120 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။
ရှေ့သို့ အလိုအလျောက် overhead ရောင်ခြည် filter ကိုစာနယ်ဇင်း
နောက်တစ်ခု: အဖွင့်အဖွင့်အပိတ်အလိုအလျှောက် Filter Press
Chamber Filter ကိုပြား
Recessed Chamber Filter ကိုနှိပ်ပါ